Burmese taste - Iora: ထမင်းလွတ် ညစာတစ်မျိုး
Posted by Iora at 7:20 AM
ပွုံးပနျး March 14, 2016 at 2:09 AM
စားချင်စရာ ဖွယ်ဖွယ်ရာရာပါပဲ။ ညစာတွေဆို ထမင်းမစားချင်ဘူး။
Anonymous March 14, 2016 at 7:30 PM
မီးမီးငယ် March 14, 2016 at 11:25 AM
Anonymous March 14, 2016 at 7:41 PM
ဒါပေမဲ့ အသက်ကြီးလာလို့ ထင်တယ်။ အချိုကုို ရှောင်သင့်ပါတယ်ဆုိုမှ ခုတလော အချိုအရမ်းစားချင်တာဘဲ သိလား။
ကိုယ့်ချိစ်ကိတ်ကို အလွန်ချေးများတဲ့ ချစ်ချစ် က အရမ်းသဘောကျတာ။
စမ်းကြည့် ကြိုက်မှာသေချာတယ်။း) ဟိ..
စံပယ်ချို March 14, 2016 at 9:09 PM
Iora March 15, 2016 at 5:16 PM
ခုနောက်ပိုင်းဆုို ဖက်ထုတ်ရွက်တွေဝယ်ဝယ်ထားပြီး မလုပ်ဖြစ်တာနဲ့ လွှတ်ပစ်ရတာများတယ်။
မြန်မာပြည်မှာ အရင်တုန်းက တရုပ်တန်းမှာ ရောင်းတဲ့ဖက်ထုတ်ခွံ ပါးပါးလေးနဲ့ ကြော်တာ အရမ်းကြိုက်တာ။
မျိုးခန့် ပုပ္ပား March 17, 2016 at 5:35 PM
ကျနော်တော့ မြန်မာပြည်တုန်းက ကညွတ်ကိုမစားဖူးဘူးအစ်မရေ
မြန်မာပြည်က ကညွတ်ကို ဒို့ ကပိုကြိုက်တယ်။
ချိုခါးလေးနဲ့ သေးသေးသွယ်သွယ် အစိမ်းရင့်ရောင်။
သက်ဝေ May 12, 2016 at 7:19 PM
ကြက်ဖတံဆိပ် ငြုပ်ဆီ ဆိုတာလေး ပြပါလားဟင်...
Iora May 17, 2016 at 1:12 PM
Anonymous May 29, 2016 at 6:35 PM
Please go below link for the chili sauce. I lost my connecting cable to connect with my phone. So I cannot transfer my photo of it.
Anonymous June 3, 2016 at 12:24 AM
နေကောင်းလား မမ..ဘယ်လောက်ပဲ အလုပ်များများ မမကို ရင်ထဲက တကယ် အမြဲသတိရနေတာပါ..
မမရဲ့ ပို့စ်တွေ တဝကြီး ဖတ်သွားပါတယ် ချက်ထားတာတွေ ထပ်ကာထပ်ကာ ကြည့်ရင်း..အားပေးသွားပါတယ် မမ..
ထပ်ခါထပ်ခါကြည့်ရင်းအားပေးသွားသူကို ဒီကလည်း ထပ်ခါ ထပ်ခါ ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်။း)